Voka-pifidianana ofisialy : Amin’ny faha-8 ny volana janoary -
AccueilSongandinaVoka-pifidianana ofisialy : Amin’ny faha-8 ny volana janoary
Voka-pifidianana ofisialy : Amin’ny faha-8 ny volana janoary
Nampahafantarin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, fa ny faha-8 ny volana janoary ho avy izao no hamoaka ny vokatra ofisialy amin’ny fifidianana filoham-pirenena notanterahina ny faha-19 ny volana desambra teo izy ireo. Izany hoe mitodika any amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana avokoa izany ny mason’ ny besinimaro amin’ izao fotoana izao, hoe hanaraka ny lalan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ve izy ireo sa hijery ny tena fahamarinana tokoa. Tsy azo hodian-tsy hita mantsy ny hetsika izay tanterahin’ ny mpomban’i Marc Ravalomanana etsy amin’ ny kianjan’ ny 13 Mai, izay nilaza fa misy ny hosoka nandritra iny fifidianana iny.
Fanontaniana faharoa mipetraka ihany koa dia ny hoe, ampy ve ny fotoana ahafahan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana nandinihina ireo fitoriana mahatratra hatrany amin’ ny 300 mahery. Tena nijery izany akaiky tokoa ve ity rafi-pitsarana ambony ity, satria dia hiankinan’ny fiainam-pirenena ary tompon’andraikitra feno amin’ izay mety hitranga aorian’ny fanapahan-keviny eo ny HCC. Tsaroana tokoa mantsy ny fitongilanan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana tamin’ ny famoahana ny voka-pifidianana ny taona 2002, izay nitongilana tany amin’ ny mpitondra tamin’ izany fotoana, ka nahatonga ny firenena nikorontana.
Hosoka, hala-bato, fampiasam-bola, fifidianana safidim-bahoaka, ireo rehetra ireo izay hita taratra nandritra ny fifidianana farany teo, ka azo antoka fa tsy ho lalovan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fotsiny ihany izany. Fiteny matetika nandritra teny ampiandohan’ny fifidianana ny hoe fitoniana, eto indray izany dia miankina betsaka amin’ny HCC ny hitoeran’izay fitoniana izany eto amin’ ny firenena. Azo antoka anefa fa laharam-pahamehan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fametrahana izany atao hoe fitoniana izany, amin’ny alalan’ny fitsarana araka ny tokony ho izy ny zotra-pifidianana miainga amin’ireo fitarainana maro eo am-pelatanany.
Manao fitsidihana any ivelany, na ny marimarina kokoa any Paris, Frantsa, ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaray mahakasika ity fitsidihan’ny Filohan’ny Repoblika ity, hanatrika ary hitarika ny fivoriana eo anivon’ny ...Tohiny
Filoha Hery Rajaonarimapianina : “ Ady iraisana ny loza voajanahary ”